मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, अब लिटरको कति ? — Imandarmedia.com
आज : २०७५ मंसिर २८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, अब लिटरको कति ?
सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो ।
पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर एक-एक रुपैयाँ मूल्य बढाइएको निगम प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताएका छन् । यसैगरी खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ र हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाइएको छ ।
सोमबार मध्यरातिदेखि लागू हुने नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल एक लिटरलाई १०२ रुपैयाँ पर्ने छ । डिजेल र मट्टितेलको एक लिटरको मूल्य ७९-७९ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी खाना पकाउने ग्यास एक सिलिण्डर किन्दा १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । हवाई इन्धन आन्तरिकमा ३ रुपैयाँ बढेर ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनका पनि प्रति ब्यारेल ५० डलर बढाएर ९ सय डलर बनाइएको छ । मूल्य समायोजन गरेपछि निगमको मासिक घाटा घटेर २६ करोड ४० लाखमा झरेको प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिए ।
अहिले निगमलाई पेट्रोलमा भने लिटरको २ रुपैयाँ ८३ पैसा नाफा छ । तर, ग्यसमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ८ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेलमा पनि निगमलाई २ रुपैयाँ ७१ पैसा नाफा छ ।
तराईमा तेलका हकमा यो मल्य भन्दा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा र पोखरा तथा दाङमा ५० पैसा कम पर्छ । दिपायल, सुर्खेत र काठमाडौंको मूल्य भने एउटै हुने निगमले जनाएको छ ।
२०७४ पुष १७ गते प्रकाशित
अब नेपालमा २ सय भारुको नोट नचल्ने, ५ सयको चल्छ कि चल्दैन ?
७ हजार सवारी साधन ट्राफिक कारवाहीमा, चार महीनामा ४३ लाख ८० हजार राजश्व सङ्कलन
न्यादी जलविद्युतको हेडरेस सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु
६० करोड रुपैयाँ बढीका झिलिमिली बत्ती आयात
आजदेखि काठमाडौंमा साझाका बिजुली बस गुडे, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन (फोटोफिचर)
ओली प्रचण्डले एकाएक किन गरे बैठकस्थल र समय नै परिवर्तन ?
नेपाली काँग्रेसभित्र बबण्डर, गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलको राजीनामा माग
सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा हिमपात, जनजीवन प्रभावित
इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको निर्वाचन शुरु, कसले मार्ला बाजी ?
सुत्केरी लिएर फर्किंदै गरेको जीप पाल्पामा दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
बलात्कार काण्डपछि फरार प्रेमनारायण झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए, हत्या कि आत्महत्या ?
पुलिस र फ्रेन्ड्स तथा मनाङ र आर्मी भिड्दै
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले ओली प्रचण्डलाई दिए यस्तो दवाव, अब के होला ?
गरिबलाई हुने भयो केही राहत, किसानको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणा
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाकाे ‘अभद्र’ रुप, पौडेलसँग यसरी भयाे सवाल जवाफ
अखिल क्रान्तिकारी सिटिईभिटी उपत्यका जिल्लाको छैटौं सम्मेलन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रज्वल शाही
बलिउड अभिनेत्री रेखाबारे जान्नैपर्ने २३ रोचक तथ्य यस्ता छन्
सिरहाको भगवानपुर बम विस्फोट, २ जना घाइते, यस्तो छ अवस्था
प्रहरीले १० राउण्ड गोली चलाउदा ठाउँको ठाउँ ढले यी गुण्डा, को हुन उनी ?
निर्मला हत्या काण्डका दुई अभियुक्तले स्विकारे आरोप, दिए यस्तो बयान ?
युवाहरुबीच रुपन्देहीमा हिंसात्मक झडप, एक जनाको मृत्यु
मानव तस्करीमा लागेकी राजदूत लक्की शेर्पामाथि सरकारले लियो यस्तो एक्शन
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको जनता खुसि पार्ने एक्सन, यी ठेकेदारलाई तिराए ३२ करोड जरिवाना
नेकपा प्रवक्ता भन्छन्- भ्रष्टाचारी भेटे कालो मोसो दल्दिनुस्
अाज नेकपाको विशला जनसभाः ५० हजारको उपस्थिति हुने, कहाँ-कहाँबाट सुरु हुदैछ र्‍याली ?
प्रचण्ड डाँका हुन्, विप्लव कमरेडलाई सलाम: किराँती
गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको कोटेशवरमा नयाँ धन्दा, प्रहरी तिनछक
यो हो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ‘शंकास्पद’ निवास
नेकपाद्वारा आयोजित जनसभाको सम्पुर्ण तयारी पुरा, क-कसलाई निम्तो ?
प्रचण्डले बादललाई गृहमन्त्री हुने की सिंघम बन्ने भनेर सोधेपछि के अायाे जवाफ ?
नेकपाले सैन्य क्याम चलाएको भन्दै गर्लिङमा नेपाली सेनाको अप्रेशन, के हो वास्तविकता ?
रुकुम पूर्वमा कसले जम्मा पार्‍यो यति धेरै हतियार ? यस्तो भन्छ प्रहरी
काठमाडौंको बत्तीसपुतलीबाट प्रहरीलाई हात लाग्यो यस्तो सफलता
निर्मला हत्याकाण्डमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका प्रदीपले दिए यस्तो सनसनीपूर्ण बयान